गोविन्द केसीको अनसन र कांग्रेसमाथि उठेका ३ प्रश्न - Prawas Khabar
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि डा. गोविन्द केसीको अनसनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । उनको माग सम्बोधनका लागि सरकारले अन्तिम समयमा जुन किसिमको समाधान खोज्न तदारुकता देखायो, त्यसको नेपाली कांग्रेसले स्वागत मात्र गरेको छैन, प्रशंसनीय काम भएको छ । तर, सरकारले यो सब बाध्य भएर गरेको पनि छिपेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठायो । नागरिक समाजले पुरै सहयोग गरे । प्रदर्शन गरे । नागरिकलाई सुसुचित गर्ने, जनमत निमार्ण गर्ने र डा. केसीको माग पूरा गर्न जरुरी छ भनेर सरकारलाई झकझक्याउने र झुकाउने सन्दर्भमा मिडियाले समेत प्रभावकारी भूमिका खेले । सबैको सहयोग र सकृय सहभागितामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ ।
डा. केसी लामो अनसन गरेर एउटा सत्याग्राहीको रुपमा आफुलाई उच्च व्यक्तित्वको परिचय बनाउन सफल भएका छन् । उनको अहिलेको अनसन १५ औं अनसनका रुपमा नभइ अन्तिम अनसन बनाउनका निम्ति सरकार इमानदार ढङ्गले भएका सहमति कायर्नन्वयन गर्नेतर्फ लाग्नेछ भन्ने विश्वास छ । त्यही विश्वासकै आधारमा कांग्रेसले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि गरेको विरोधको सूचना फिर्ता लिएको छ ।
कांग्रेसमाथि तीन प्रश्न
सरकारका पक्षबाट नेपाली कांग्रेसमाथि पछिल्लो समय आरोपका रुपमा भ्रम फैलाउने नियतले तीनवटा प्रश्नहरु गरिएका छन् ।
पहिलो प्रश्नः कांग्रेसले सरकारमा छँदा डा. केसीको माग र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समाधान किन गर्न सकेन ?
सरकारमा छँदा चाँहि डा. केसीको मागको सम्बोधन नगर्ने अनि सरकारबाट बाहिरिएपछि मुद्दा बनाउने भन्ने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न व्यक्तित्वहरुबाट, सरकारबाट र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रश्न आएका छन् ।
यो सन्दर्भमा के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वकालमा नेपालमा मेडिकल कलेजहरु खुलेका हुन् । संख्या बढेका हुन् । संख्या बढेपछि समस्या पनि बढेका हुन् । र समस्या बढेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठेका हुन् । र समयल डा. गोविन्द केसीलाई जन्माएको हो ।
औषधिमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड, २५ अर्ब लगानीसँगै ४५ प्रतिशत आपूर्ति
अस्लिल १६ हजार वेबसाइट बन्द
अछाममा आठ वर्षीया बालिका बलात्कृत
एकै दिनमा ६० बालपुस्तक अनुवाद
अष्ट्रेलिया जानुअघि पुर्ख्यौली घर गएका सुमित फर्किएनन्